Home Wararka Yamamoto oo kulankii shalay ka sheegay in Dowlad Goboleedka ay hormuud ka...
Yamamoto oo kulankii shalay ka sheegay in Dowlad Goboleedka ay hormuud ka yihiin la dagalanka argagixisada
Kulankii shalay lagu qabtay Xarunta Xalane ee looga hadlayay arimaha amniga Soomaaliya aya waxa ka hadlay Safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Mudane Yamamoto. Kulankaan oo loo yaqaaan marka la soo gaabiyo “security sector focused, strand A2” ayuu safiirku ku sheegay in Dowlad Goboleedku lafdhabar u yihiin la dagaalanka kooxaha argagaxisadda ee ka howlgala Soomaaliya.
Hadalka Safiirka ayaa waxa uu fartiin cad u dirayay Dowlada Farmaajo ee dagaalka ba’an kula jirta burburinta Dowlad Goboleedyadda. Sida uu horay u sheegay Madaxa AMSIOM waa ay adkaanaysaa in dagaal ka dhan ah Al Sbaaab lagu guuleysto hadii ayan jirin awood ka timaado Dowlad Goboleedyadda.
Dowladda Soomaaliya oo ka talisa magaaladda Muqadishu kaliya ayaa ku guul daraysatay in ay nabad ku soo dabaasho Muqadishu iska da’aa dalka intiisa kale.
Previous articleMahad Cawad oo ku dooday in uu difaacayay qadiyada beesha Dir laakiin Xildh. beesha way ku gacan seyreen
Next articleGudigii ka socday AU, UN oo maanta booqday Baydhabo ugana digay DF faragalinta DGKG
MW Mustafa Cagjar: “Beelaha Direed ha ku mashquulaan Jabuuti iyo Somaliland...